एप्पल र अमेजन : कसको भविष्य उज्ज्वल ?- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
एप्पल र अमेजन : कसको भविष्य उज्ज्वल ?
भाद्र २६, २०७५ एजेन्सी
काठमाडौँ — स्याउ र सुन्तला भनेजस्तै एप्पल र अमेजन फरक खालका कम्पनी हुन् । प्रयोगकर्ताले रुचाउने डिभाइस उत्पादन गर्ने एप्पल एक प्रविधि कम्पनी हो । उपभोक्ताहरू अन्य सस्ता ब्रान्ड त्यागेर एप्पलका उत्पादन किन्न खोज्छन् ।
अर्कोतर्फ अमेजनको बजार त्यहाँ छ जहाँ प्रयोगकर्ताहरू सस्ता सामान खोज्न, सजिलै र छिटो प्राप्त गर्नका लागि जान्छन् ।
सन् २००७ मा पहिलो पटक आइफोन बिक्री सुरु भएपछि एप्पलको सेयर मूल्य ११ सय प्रतिशतले बढेको छ र पछिल्लो वर्षमा मात्रै यो तीन गुणाले बढेको छ ।
अमेजनको सेयर मूल्य भने तीव्र र स्थिर रूपमा बढिरहेको छ । यसको बजार मूल्य १६ दिनमा ६ सय अर्ब डलरबाट बढेर ७ सय अर्ब डलर पुगेको थियो । यसविपरीत एप्पललाई यही सफलता पाउन ६ सय २२ दिन लागेको थियो ।
सेप्टेम्बरको पहिलो साता अमेरिकी कम्पनी अमेजनको बजार मूल्य १० खर्ब डलरमाथि पुग्यो । त्यसको करिब एक महिनाअघि नै एप्पलले पहिलो पब्लिक कम्पनीको रूपमा यो उचाइ छोएको थियो । १० खर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका यी दुवै कम्पनीले पछिल्ला केही वर्षयता ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूको यो सफलताको शृंखला जारी रहला ? भविष्यमा कुन कम्पनी झन् सफल बन्ला ?
एप्पल र अमेजनले दुई भिन्न उत्पादन र सेवा आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्छन् । यी दुवै कम्पनी बजारमा सबैभन्दा राम्रो सेयर सफलता प्राप्त गरिरहेका ५ प्रविधि कम्पनीमध्येका हुन् जसलाई छोटकरीमा–एफएएएनजी (फाङ) भनिन्छ । यसअन्तर्गत फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स र गुगल पर्छन् ।
एप्पलको आम्दानीको अधिकांश हिस्सा मुख्यत: आइफोन, आइप्याड, म्याक र आइपोडको बिक्रीबाट प्राप्त हुन्छ । विश्व मोबाइल बजारमा एप्पलको १४ प्रतिशत मात्रै सेयर छ । तैपनि धेरै मोबाइल बिक्री गर्ने सामसङको आम्दानीलाई यसले धेरैले उछिन्छ । जस्तो कि २०१८ को पहिलो त्रैमासिकमा एप्पलको आम्दानी ६१ अर्ब डलर थियो भने सामसङको आम्दानी १९ अर्ब डलर मात्रै थियो । आम्दानीको हिसाबले तेस्रो चिनियाँ कम्पनी हुवावेको आम्दानीको ग्राफ सामसङको भन्दा आधा अर्थात् ८ अर्ब डलर मात्रै छ ।
आफ्नो आईओएस डिभाइसमा निर्भर एप्पलको आम्दानीको स्रोत राम्रो भए पनि आगामी दिनमा हुने प्रयोगकर्ताको सीमितताले उसलाई ठूलो चुनौती आइपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
‘एप्पलको आम्दानी त घट्नेछैन तर भविष्यमा उसका आम्दानीका नयाँ अवसर भने सीमित बन्दै जान सक्छन्,’ जुनिपर रिसर्चका विन्डसोर होल्डेन भन्छन् ।
डिभाइस बिक्रीमा अमेजनको प्रगति सोचेअनुरूप छैन । अमेजनको किन्डल इ रिडर, किन्डर फायर टयाब्लेट र इको भ्वाइस कन्ट्रोलर स्पिकरको बिक्री सोचेअनुरूप बढेको छैन ।
विश्लेषकहरू प्रतिस्पर्धामा कायम रहनका लागि आफ्नो डिभाइस कम नाफामा बिक्री गर्ने र त्यसबापतको सेवा र त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीबाट नाफा लिने मोडलमा जानुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ ।
जुनिपर रिसर्चका अनुसार सन् २०१७ मा विश्वभर १ अर्ब ५० करोड स्मार्टफोन बजारमा गएको थियो । पश्चिमी देशका अधिकांश व्यक्तिको हातमा स्मार्टफोन पुगिसकेकाले आगामी ५ वर्ष स्मार्टफोनको बिक्री कम हुने आकलन गरिएको छ ।
एप्पलले पनि हरेक देशमा चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीबाट ठूलो चुनौती भोगिरहेको छ जसले कम मूल्यमा उच्च सुविधा भएका स्मार्टफोनहरू निर्माण गरिरहेका छन् ।
मूल्य र फिचरमा भइरहेको यो प्रतिस्पर्धाका कारण एप्पललाई आम्दानीको स्रोत डिभाइस बिक्रीमा केन्द्रित राख्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अमेजन र एप्पल दुवै अहिलेका सफल कम्पनी हुन् । यी दुवै कम्पनीको संयुक्त बजार मूल्य अमेरिकामा सफल रहेका २५ ठूला कम्पनीको मूल्यभन्दा बढी हुन्छ ।
दुवै कम्पनी अहिलेका हिसाबले सफल भए पनि दीर्घकालीन रूपमा कुन कम्पनीको वृद्धि हुनेछ ?
अनुसन्धान कम्पनी ग्लोबल डाटा रिटेलकी नेल सउन्डर्सको विचारमा दुवै कम्पनीले निरन्तर वृद्धि गरिरहनेछन् तर फरक रूपमा ।
एप्पलले भविष्यमा अहिलेजस्तो धेरै आइफोनहरू बजार पठाउन सक्नेछैन । बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाका कारण एप्पलको डिभाइस बिक्री घट्ने उनको अनुमान छ ।
एप्पलले आफ्नो वृद्धिलाई ठप्प हुन नदिने एउटा ‘ब्रेकथ्रु’ उत्पादन बजार पठाउनुपर्ने उनको ठहर छ । योबाहेक कम्पनीले आफ्नो ठूलो बजार पनि खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अमेजन एप्पलभन्दा कान्छो कम्पनी हो । यसको अझै कैयौं देशमा आफ्नो उपस्थिति नै छैन । त्यसकारण अमेजनलाई वृद्धिका लागि एप्पललाई भन्दा बढी अवसर पर्खिरहेका छन् । अमेजनको ग्राहक आधार पनि एप्पलको भन्दा बढी छन् ।
‘एप्पलभन्दा अमेजन मास मार्केट प्लेयर हो,’ उनी भन्छन्, ‘जोकोहीले अमेजनको सेवा लिन सक्छन् ।’
‘एप्पलको हकमा एक ग्राहकले एक वर्षमा बढीमा एउटा डिभाइस मात्रै किन्न सक्ने हुन्छ । यो हिसाबले अमेजनको सम्भावना एप्पलको भन्दा बढी हुनेछ ।’
योबाहेक दुवै कम्पनीले भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने अन्य चुनौती पनि छन् । यी दुवै कम्पनी यति ठूला भए कि भविष्यमा दुवै कम्पनीले विभिन्न देशका नियमनकारी निकायबाट ठूलो चुनौती थेग्नुपर्नेछ । नियमनकारीको आँखा पर्नु भनेको टयाक्स बढी तिर्नु पनि हो ।
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:३१
भारतबाट मात्र सवा खर्ब रेमिटयान्स
नेपालले भित्र्याएको कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्समध्ये भारतबाट आएको १५ प्रतिशत हो
काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्ष भारतबाट मात्र सवा खर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्स नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो करिब साढे २७ प्रतिशतको वृद्धि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्स सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको विस्तारसँगै भारतबाट आउने रेमिटयान्समा पनि सुधार आएको छ ।
भारत छिमेकी राष्ट्र हुँदा पनि यसअघि त्यहाँबाट वैधानिक प्रणालीबाट रेमिटयान्स मुलुक भित्र्याउन सकिएको थिएन । पछिल्ला तीन वर्षमा भारतमा रेमिटयान्सलगायत गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको विकाससँगै बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल भित्रिने रेमिटयान्स पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्ष भारतबाट आएको रेमिटयान्स सोही अवधिको कुल रेमिटयान्सको करिब १५ प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत वर्ष भारतबाहेकका राष्ट्रबाट रेमिटयान्समार्फत ६ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) मुलुक भित्रिएको हो ।
कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्समध्ये बाँकी १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ भारतबाट आएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा भारतबाट आउने रेमिटयान्समा उल्लेख्य सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘केही बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटयान्स कम्पनीको सक्रिय सहभागिताले भारतबाट आउने रेमिटयान्स बढेको हो ।’ आउँदा दिनहरूमा यो क्रम झनै बढ्ने उनको दाबी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भारतबाट मात्र करिब ८९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रेमिटयान्स भित्रिएको थियो ।
नेपालबाट करिब २० लाख नेपाली रोजगारीका लागि भारत गएको तथ्यांक छ । भारत सरकारले नेपाली मूलका करिब ६० लाख भारतमा बसोबास गर्ने बताउँदै आएको छ । नेपाली मूलका सबै नेपाली नागरिक होइनन् र ती सबैले नेपाल रेमिटयान्स पनि पठाउँदैनन् । यसकारण नेपाल आउने रेमिटयान्स रोजगारीमा गएका २० लाख नेपालीमध्येले नै पठाउने हो । ती नेपालीहरूले यसअघि पनि नेपालमा पैसा पठाउँथे ।
तर, त्यतिबेला वैधानिक (बैंकिङ) प्रणालीमार्फत पैसा आउँदैनथ्यो । कतिपय नेपालीले आफैं पैसा बोकेर आउँथे भने केहीले हुन्डीलगायत गैरकानुनी च्यानल मार्फत पठाउँदै आएका थिए । यसरी ती माध्यमबाट आएको पैसाको रेकर्ड हुँदैन । त्यसो त रोजगारीका लागि नेपाल आएका भारतीयहरूले पनि भारतमा पैसा पठाउँछन् । भारतीयहरूले वार्षिक कति रेमिटयान्स पठाउँछन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग पनि छैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल एसबीआई, एभरेस्टलगायत बैंकहरूसँगै आईएमई, प्रभुलगायत रेमिटयान्स कम्पनीहरूले पनि भारत ठूलो मात्रा रेमिटयान्स भित्र्याइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । रेमिटयान्स सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको विकास र विस्तारसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा भारतबाट आउने रेमिटयान्स उल्लेख्य रूपमा बढेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका महासचिव सुमन पोखरेलले बताए । ‘भारतबाट धेरै भन्दा धेरै रेमिटयान्स ल्याउन रेमिटयान्स कम्पनीहरूले निकै मिहिनेत गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्स आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आउनु यसकै परिणाम हो ।’
भारत नेपालको छिमेकी राष्ट्र भएकै कारण दुई देशमा आवत–जावतका लागि पासपोर्ट र भिसा चाहिँदैन । यही कारण धेरै भारतीयहरू रोजगारका लागि नेपाल आएका छन् भने त्यत्ति नै संख्यामा नेपालीहरू भारत गएका छन् । भारतमा नेपालीहरूले त्यहाँको बैंकमा सजिलै खाता खोल्न पाउँदैनन् । भारतमा विदेशीलाई बैंक खाता खोल्न निकै झन्झटिलो व्यवस्था छ ।
यही कारण धेरै नेपालीको बैंक खाता छैन । भारत रोजगारीमा जानेहरूमध्ये बहुसंख्यक अशिक्षित छन् । पैसा पठाउनकै लागि उनीहरूले धेरै झन्झट बेहोर्न चाहँदैनन् । यसकारण सबभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट्र भएर पनि यसअघि ठूलो मात्रामा रेमिटयान्स वैधानिक प्रणालीमा आउन सकेको थिएन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्सलगायत गैरबैंकिङ संघसंस्थाहरूले व्यवसाय विस्तार भएपछि बिस्तारै नेपालीहरूले वैधानिक प्रणालीमार्फत रेमिटयान्स पठाउन थालेका हुन् । ‘गएको तीन वर्षयता भारतबाट आउने रेमिटयान्समा धेरै सुधार भएको छ,’ पोखरेलले भने ।
नेपाल भित्रिने रेमिटयान्समध्ये करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । खाडी राष्ट्रहरूमध्ये पनि साउदी अरब, कतार, कुबेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) र बहराइनबाट मात्र उक्त रकम नेपाल भित्रिएको हो । सो क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरू ओमनबाट औपचारिक माध्यमबाट रेमिटयान्स भित्रिने गरेको छैन । हाल परिस्थिति बदलिएको छ । पछिल्ला एक/डेढ वर्षयता साउदी र कतारको हिस्सा घट्दै छ भने मलेसियाको अंश बढन थालेको तथ्यांहरूमा देख्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने भनिएका राष्ट्र (जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका आदिबाट करिब १२ प्रतिशत रेमिटयान्स मात्र मुलुक भित्रिंदै सरकारी तथ्यांक छ । खाडी राष्ट्रहरूको तुलनामा ती मुलुकमा नेपाली कामदारको संख्या कम भए पनि आम्दानी निकै धेरै हुन्छ । त्यो आम्दानीको ठूलो हिस्सा नेपाल पनि भित्रिन्छ ।
तर, त्यो रकमलाई वैधानिक बाटो (फर्मल च्यानल) मा समेट्न सकिएको छैन । यसले एकातिर नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ भने अर्कातिर रेमिटयान्सको वास्तविक अवस्था र योगदानको सही मूल्यांकन हुन नपाएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
ठूला भनिएका राष्ट्रहरूमा बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीहरूको सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि जटिल कानुनी व्यवस्था रहेकाले पनि अपेक्षित रूपमा रेमिटयान्स भित्र्याउन समस्या भएको जनाइएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२८